Goorma ayay ku beegan tahay maalinta koowaad ee Ciidul…
Boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay in xalay la raadiyay curashada Bisha 12-aad ee Hijriyada (Dil-Xijjah) (Carafo), maadaama shalay ahayd maalintii 29-aad, waana xiliga la raadinayo bilashada Bisha Cusub, haddii la waayo waxaa la dhameystiraa 30-ka.
Maanta waa 30-ka Bisha Dul-Caqdah (Siditaal), caawa lama raadin doonin Bisha, maadaama la dhameystiray soddonka bisha, berri waa 1-da Bisha 12-aad Dil-Xijjah (Carafo) ee Hijriya.
Marka laga bilaabo Berri oo Arbaco oo ay koow tahay Bisha Dil-Xijjah, maalinta sagaalaad oo buurta Carafo isugu tagto xudeyda waxa ay ku beegan tahay Khamiista oo ah 30-ka July, halka Maalinta xigta oo ah 31-ka ku beegan tahay Ciidul Adxaa 10-ka bisha.
Maxaa sanadkaan isbadal ah oo jira?
Sanadkaan waa uu ka duwan yahay sanadihii hore, waxaa la joojiyay xujeydii dalalka kala duwan ee Caalamka kasoo aadi jirtay Boqortooyada Sacuudiga si ay u gutaan rukniga shanaad ee tiirarka Islaamka.
Sababtu waa cabsida iyo faafitaanka cudurka Covid-19 oo guud ahaan Caalamka gaaray, sacuudiga waxaa ka diiwaangashay kiisas gaaraya 253,349 guud ahaan dadka laga helay, 2,523 waa dhimasho iyo 203,259 dad ka caafimaaday, halka guud ahaan uu cudurku ku dambeeyo 47,567-ruux.
Dowladdu waxa ay fasaxday dad kooban oo gudaha sacuudiga ka xajinaya, iyanna waxa ay raaci doonaan shuruudo dhowr ah oo loo qorsheeyay, waxaana kamid ah in ay kala fogaadaan, afka iyo sanka oo xirtaan iyo waxyaabo kale oo looga fogaanayo faafitaanka cudurka.
Sanad waliba waxa si joogto ah sacuudiga Xajka u tagayay dad kor u dhaafaya 2-Milyan oo ruux oo ka kala socdaalay dalalka caalamka, mararka qaar waa ay ka bataan, waxaana intaa dheer tiro kale oo gudaha dalkaas ku sugan.
Wasaaradda Xajka iyo Cumrada Boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay in sanadkii hore ay diiwaangeliyeen Xujaaj dalal kala duwan ka safartay, waxa ay Sacuudiga ku tageen Diyaarado, Maraakiib iyo dad kooban oo u badan kuwa soohdinta la leh oo xadka ka gudbay.